Luka 5 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Luka Asɛmpa 5:1-39
Ɔyɛɛ anwonwade ma woyii mpataa pii; asuafo a wodi kan (1-11)
Ɔsaa ɔkwatani bi yare (12-16)
Yesu saa obubuafo bi yare (17-26)
Yesu frɛɛ Lewi (27-32)
Wobisaa no akɔnkyen ho asɛm (33-39)
5 Bere bi, na Yesu gyina Genesaret ɔtare*+ no ho, na na nnipadɔm akyere no so retie Onyankopɔn asɛm. 2 Na ohuu akorow abien sɛ esisi ɔtare no ho, nanso na mpataayifo* no asisi afi mu rehohoro wɔn asau mu.+ 3 Ɔkɔforoo ɔkorow no baako a ɛyɛ Simon dea, na ɔsrɛɛ no sɛ ompia ɔkorow no mfi asaase so nkɔ akyiri kakra. Afei ɔtenaa ɔkorow no mu, na ofii ase kyerɛkyerɛɛ nnipadɔm no. 4 Bere a ogyaee kasa no, ɔka kyerɛɛ Simon sɛ: “Pia kɔ baabi a emu dɔ, na mungu mo asau no mfa nyi nam.” 5 Ɛnna Simon ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, yɛayɛ adwuma anadwo no nyinaa nso yɛannya hwee.+ Nanso nea woaka yi nti, megu asau no.” 6 Na bere a wɔyɛɛ saa no, woyii mpataa pii. Nokwasɛm ne sɛ, wɔn asau no fii ase tetewee.+ 7 Enti wohim wɔn nsa kyerɛɛ wɔn mfɛfo a wɔwɔ ɔkorow baako no mu sɛ wɔmmɛboa wɔn. Na wɔbae, na wɔde mpataa no hyɛɛ akorow abien no nyinaa mama, na efii ase sɛ ɛremem. 8 Bere a Simon Petro huu eyi no, ɔkotow Yesu nan ase kae sɛ: “Awurade, fi me nkyɛn kɔ, na meyɛ ɔdebɔneyɛfo.” 9 Ɔkaa saa, efisɛ mpataa a woyii no maa ɔne wɔn a wɔka ne ho no nyinaa ho dwiriw wɔn. 10 Sebedeo mma+ Yakobo ne Yohane, a wɔne Simon yɛ adwuma no nso ho dwiriw wɔn. Nanso Yesu ka kyerɛɛ Simon sɛ: “Nsuro. Efi saa bere yi rekɔ no, wubeyi nnipa.”+ 11 Enti wɔsan de akorow no baa asaase so, na wogyaw biribiara hɔ kodii Yesu akyi.+ 12 Bere foforo a ɔwɔ nkurow no baako mu no, hwɛ! ná ɔbarima bi wɔ hɔ a kwata ayɛ ne ho nyinaa!* Bere a ohuu Yesu no, ɔde n’anim butuw fam srɛɛ no sɛ: “Awurade, sɛ wopɛ a, wubetumi asa me yare.”*+ 13 Enti, ɔteɛɛ ne nsa kaa no, na ɔkae sɛ: “Mepɛ! Wo ho ntɔ wo.”* Na amonom hɔ ara, ne kwata no tu yerae.+ 14 Ɛnna ɔhyɛɛ ɔbarima no sɛ ɔnnka nnkyerɛ obiara. Ɔka kaa ho sɛ: “Mmom kɔ na fa wo ho kɔkyerɛ ɔsɔfo no, na esiane sɛ wo ho atɔ wo nti,* fa afɔrebɔde a Mose kyerɛe no+ ma asɔfo no, na ayɛ adanse ama wɔn.”+ 15 Nanso Yesu ho asɛm trɛwee pii, na nnipadɔm pii bae sɛ wɔrebetie no na wasa wɔn yare.+ 16 Nso, ná ɔtaa kɔ baabi a atew ne ho kɔbɔ mpae. 17 Ɛda bi a na ɔrekyerɛkyerɛ no, na Farisifo ne mmarakyerɛfo a wofi nkuraa a ɛwowɔ Galilea ne Yudea ne Yerusalem nyinaa ase aba no tete hɔ, na na Yehowa* tumi wɔ no so a ɔde bɛsa yare.+ 18 Na hwɛ! ná mmarima bi so obubuafo bi a ɔda kɛtɛ so, na na wɔrehwehwɛ ɔkwan a wɔbɛfa so de no abɛto Yesu anim.+ 19 Nnipadɔm no nti, wɔannya kwan amfa no amma mu. Enti wɔforo kɔɔ ɔdan no atifi, na wogyaagyaa ɔne kɛtɛ no mu faa dan no soro bɛtoo Yesu anim.* 20 Bere a Yesu huu wɔn gyidi no, ɔkae sɛ: “Ɔbarima, wɔde wo bɔne akyɛ wo.”+ 21 Ɛnna akyerɛwfo ne Farisifo no fii ase kekae sɛ: “Hena ne saa onipa yi a ɔreka abususɛm yi? Obiara nni hɔ a obetumi de bɔne akyɛ, gye Onyankopɔn.”+ 22 Bere a Yesu huu wɔn adwene no, obisaa wɔn sɛ: “Dɛn na moresusuw ho wɔ mo koma mu yi? 23 Nea ɛwɔ he na ɛyɛ mmerɛw, sɛ́ wɔbɛka sɛ: ‘Wɔde wo bɔne akyɛ wo,’ anaasɛ wɔbɛka sɛ: ‘Sɔre na nantew’? 24 Nanso nea ɛbɛyɛ na moahu sɛ onipa Ba no wɔ tumi wɔ asaase so sɛ ɔde bɔne kyɛ nti—” ɔka kyerɛɛ obubuafo no sɛ: “Mise wo sɛ, sɔre, fa wo kɛtɛ, na kɔ wo fi.”+ 25 Ɛnna obubuafo no sɔre gyinaa wɔn anim, na ɔfaa nea na ɔda so no. Afei ɔkɔɔ ne fi, na ɔrekɔ nyinaa, na ɔrehyɛ Onyankopɔn anuonyam. 26 Na ɛyɛɛ wɔn nyinaa nwonwa, na wofii ase hyɛɛ Onyankopɔn anuonyam. Ehu kaa wɔn ma wɔkae sɛ: “Ɛnnɛ de, yɛahu anwonwade!” 27 Eyi akyi no, opue kohuu obi a ogyigye tow a wɔfrɛ no Lewi sɛ ɔte baabi a wogyigye tow, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Bedi m’akyi.”+ 28 Ɛnna ogyaw biribiara hɔ, na ɔsɔre dii n’akyi. 29 Afei nso, Lewi tow pon kɛse bi wɔ ne fi maa no, na na wɔn a wogyigye tow no bebree ne nnipa foforo ka wɔn ho ne wɔn redidi.*+ 30 Enti Farisifo ne wɔn akyerɛwfo no fii ase nwiinwii kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “Adɛn nti na mo ne wɔn a wogyigye tow ne nnebɔneyɛfo didi na monom?”+ 31 Yesu buaa wɔn sɛ: “Wɔn a wɔte apɔw no nhia ɔyaresafo; wɔn a wɔyare mmom na wohia.+ 32 Mamma sɛ merebɛfrɛ atreneefo. Mmom mebae sɛ merebɛfrɛ nnebɔneyɛfo sɛ wɔnsakra wɔn adwene.”+ 33 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yohane asuafo no taa yɛ akɔnkyen,* na wɔbɔ mpae, na Farisifo asuafo nso yɛ saa ara, nanso w’asuafo de, wodidi, na wɔnom.”+ 34 Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Bere a ayeforokunu no wɔ ne nnamfonom nkyɛn yi, mubetumi ama ne nnamfonom no ayɛ akɔnkyen anaa? 35 Bere bi bɛba a wɔbɛfa ayeforokunu+ no afi wɔn nkyɛn, saa bere no na wɔbɛyɛ akɔnkyen.”+ 36 Afei, ɔmaa wɔn mfatoho bi sɛ: “Obiara nni hɔ a obetwa ntama foforo de atare ataade dedaw mu. Sɛ ɔyɛ saa a, ataade foforo no bɛtew, na foforo no bɛyɛ soronko wɔ dedaw no ho.+ 37 Bio nso, obiara nni hɔ a ɔde bobesa foforo gu nsã kotoku dedaw mu. Sɛ ɔyɛ saa a, bobesa foforo no bɛpae nsã kotoku no ama bobesa no ahwie agu, na nsã kotoku no bɛsɛe. 38 Mmom ɛsɛ sɛ wɔde bobesa foforo gu nsã* kotoku foforo mu. 39 Obiara a wanom bobesa dedaw no mpɛ bobesa foforo, efisɛ ɔka sɛ, ‘Dedaw no na eye.’”
^ Kyerɛ sɛ, Galilea Po.
^ Anaa “kwata aguare no!”
^ Anaa “wɔn a wɔwɔ Yesu anim no mfinimfini.”
^ Anaa “ne wɔn te adidipon ho.”
^ Anaa “taa di mmuada.”